Pest control | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Sokajy Pest control
Ahoana ny fomba hanesorana ny voangory May
Miaraka amin'ny fiakaran'ny hafanana dia misy bibikely maro samihafa ao amin'ny tany. Ny ankamaroan'izy ireo dia mitondra tombony azo tso-drano: mandoto sy maniry zavamaniry. Saingy ny sasany amin'izy ireo dia manao ratsy kokoa noho ny tsara. Anisan'ireny bibikely maloto ireny ny toerana iray manokana an'i Khrushka. Mba hampihenana ny fahasimbana aterak'ity voangory ity, dia mila mahafantatra ireo fepetra fisorohana izay mahomby, ary ny hitari-dalana amin'ny fomba hanatanterahana izany.
Ahoana ny fomba hamahana ny vitsika amin'ny tranokala
Maro, raha mahita alika any anaty ala, dia aza mihaino azy mandra-pandoany. Ny amboadia ao an-jaridaina dia mety hiteraka fahasimbana tsy hay lazaina. Ireo bibikely ireo dia tsy misy mpitsidika tsy manan'aina manerana ny planeta, manitsy tsara ny toetr'andro izy ireo ary mamerina tsara. Ny antsy dia mety ho loko, poizina na tsia, manidina sy mahazatra.
Nahoana ny ravina mihodina mavo, ahoana no hiarovana ny lily amin'ny aretina sy ny bibikely
Maro ny zaridaina mamolavola lisy eo amin'ny efitranony. Ny fitiavany ny fomba tsotra handosirana sy ny fikarakarana mora. Aza hadinoina anefa ny endriky ny agrotechnics amin'ireny loko ireny. Raha mitandrina ny fepetra momba ny fambolena sy ny fikarakarana ianao dia tsy hijaly amin'ny aretina na ny bibikely ny lily. Ny endriky ny voninkazo felam-boninkazo Lily - dia zavamaniry isan-taona, fa mba haniry isan-taona ny voninkazo isan-taona, dia tsy maintsy mamolavola azy io isaky ny telo taona.
Ny aretina sy ny bibikely manimba ny spathyphilum, ny fomba hahazoana antoka ny "fahasambarana vehivavy"
Ny ankizivavy dia mahafinaritra ny Spathiphyllums, satria tsy mionona velively ireo voninkazo ireo, afaka mitombo ao amin'ny toerana mahatsiravina ary miaraka amin'izay dia mbola hampifaly anao amin'ny zana-tany maitso sy voninkazo mahafinaritra. Saingy mitohy izany rehetra izany raha tsy misy tabilao misy aretina na famantarana hafa momba ny aretina miseho eo amin'ny ravin'ny spathiphyllum, izay tokony alaina avy hatrany.
Bubbleplay: fitsangatsanganana sy fikarakarana
Anisan'ireo zavamaniry misy ravin-tsakafo, ny tadin'ny raboka no kely indrindra mitaky ny fikarakarana, ary matetika izy io no ampiasaina ho fanafody. Eto ambany eto dia hianatra amin'ny an-tsipiriany ireo karazana malaza indrindra amin'io karazam-bozaka io, ny endriny fanodinana ary ny fomba hikarakarana ny tsoka. Tsidiho ny Bubbleplod Bubbleplodnik dia akorandriaka fingotra, ny tombontsoa lehibe ananan'izy ireo dia fitomboana haingana, tsy mendri-piderana, ary ny endrika mahafinaritra, izay mitohy mandritra ny vanin-taona miposaka.
Swede dia zavamaniry misy karaoty sy rambombe, noheverina ho ny tanindrazany i Soeda. Ny fakan-javamaniry dia manana nofo marevaka sy marevaka marefo, dia havatry ny radisy, radisy ary karazana varahina rehetra. Fitsipika momba ny famandrihana Swede Inona no atao hoe swede, efa mazava tsara izao, andeha hojerentsika ny hevi-dehibe momba ny fambolena ity fotony ity.
Rudbeckia isan-taona: karazana fiahiana
Rudbeckia tsy hita isa dia zavamaniry mahafinaritra sy mamiratry ny fianakaviana Astrov. Avy any Amerika Avaratra. Ny voninkazo toy izany dia mety ho fanampim-panazavana amin'ny fandriana misy ranom-boankazo, ary na dia ny mpizaha tany fambolena aza dia afaka manaraka ny fitsipiky ny fikarakarana. Fantatrao ve? Rudbeckia dia nahazo ny anarany ho fanomezam-boninahitra an'ireo botane avy any Soeda, Olof Rudbek (izay nahita ny rafi-panaon'ny olombelona) sy ny rainy.
Tsimoka avy any Brussels: fambolena, fiahiana, tombontsoa
Amin'ity lahatsoratra ity dia hampianatra anao ny fomba hambolena ny tsimok'aretin'i Brussels araka ny tokony ho izy. Avelao hiresaka aminao ny toetry ny tany sy ny hoe impiry ianao no mila rano. Tsy hianatra zava-baovao fotsiny ianao, fa hianatra zava-baovao mahaliana momba ny laisoa ihany koa. Fantatrao ve? I Karl Linney no nanoratra voalohany ny siansa, ary nantsoiny hoe Bruxelles taorian'ny mpamboly Belzianina avy any Bruxelles.
Tsiambaratelo ny fitomboan'ny salvia
Amin'ity lahatsoratra ity dia hiresaka momba ny salvia sy ny karazany maro isika, hianatra ny fomba hampitomboana sy hikarakarana ilay orinasa. Mianatra ny fomba famongorana ireo bibikely salvia sy ny zava-mahadomelina ao amin'io zavamaniry io isika. Fantatrao ve? Salvia (Salvia) avy amin'ny teny latinina dia adika hoe "mampiroborobo ny fahasalamana." Anarana hafa ho an'ny salantsa dia salvia.
Ny fandinihan-tena lehibe amin'ny fikarakarana tradescantia
Ny garden tradescantia dia zavamaniry maharitra isan-taona izay mamolavola hazo maitso. Ny tsimok'aretin'ny zavamaniry amin'ny fiandohan'ny vanim-potoanan'ny zavamaniry dia mahitsy, avy eo izy ireo dia lavo. Ny ravina dia afaka mahatratra hatramin'ny 21 cm. Ny voninkazo Tradescantia dia mavokely manga amin'ny manga na manga manga, izay marefo haingana.
Fambolena sy fiahiana ny mainty hoditra mainty hoditra
Ny fianakaviana antitra dia manana karazany efa-polo. Ao amin'ny latabay, ny loholona mainty dia matetika no namboly. Izy io dia heverina fa ny karazana varotra indrindra, ankoatra ny volkano sy ny loko ampiasaina ho an'ny tanjona medikaly. Ny fambolena amoron-tsoavaly tsara hatramin'ny ela, ny bevohoka dia tsy navotsotra, namboly teo akaikin'ny trano, nino fa ny amboara dia mirakitra fanahy ratsy.
Ahoana ny fomba hiarovana ny "hazo dollar" amin'ny bibikely sy aretina
Zamioculkas dia akorandriaka tsara tarehy avy amin'ny fianakaviana Aroid. Io zavamaniry zavamaniry misy ranon-tsavony io miaraka amin'ny satroboninahitra tsara tarehy sy maitso maitso. Saingy taorian'ny vanim-potoana vitsivitsy taorian'ny nandevenana ny zamiokulkas dia nivadika mavo ny raviny. Hojerentsika ato amin'ity lahatsoratra ity ny antony mahatonga izany, ary ahitanao koa ny fomba hiatrehana ilay olana.
Torohevitra mahasoa momba ny fitomboan'ny balsama ao anaty trano
Iray amin'ireo zavamaniry indostrialy malaza indrindra, izay efa napetraka teo amin'ny varavarankelin'ny trano fonenantsika sy trano, dia balsama (amin'ity tranga ity, efitrano iray hafa). Tsy sarotra ny mikarakara an'io voninkazo io, saingy mbola mila mahafantatra ny fomba famokarana, fampielezana, rano ary hanitra balsam ao an-trano ianao.
Ahoana no hiatrehana ny môlea amin'ny trano fatoriany?
Ny tantsaha tsirairay dia maniry ny hitazona ny masony amin'ny toe-piainana tsara, ary ny vokatra ao amin'ny zaridaina dia azo antoka sy tsy misy feo. Fa raha vetivety monja no hitoetra aminao, dia hataony lavaka be dia be izy, ary hongotany ny vokatra rehetra azonao. Diniho izay hatao raha misy mololo ao amin'ny zaridinao, ary ahoana no hiatrehana izany. Ny endriky ny fiainan'ny mole eo amin'ny dacha.
Fahasalamana sy aretina of yucca: fisorohana, soritraretina ary fitsaboana
Yucca dia orinasa mpamokatra hafanana izay mitombo ao anatin'ny toe-javatra iainana miaraka amin'ny hain-tany mafy ary afaka manova ho hazo goavana. Mora ny mampitombo an'io zavamaniry io ao an-trano, saingy misy aretina mety hisy fiantraikany izany, ary zava-dehibe ho an'ny mpamboly tsirairay ny mahafantatra ny fomba hiatrehana izany. Ny aretina Yucca: Ny fisorohana sy ny fitsaboana Ny orinasa Yucca dia tsy mitaky ny lanjany ara-boajanahary amin'ny tany sy ny tsy fahampian-drano amin'ny fambolena, satria io dia tafahoatra ny hafanana izay matetika miteraka aretina ao amin'ilay orinasa.
Tsiambaratelon'ny fambolena sy ny fikarakarana ny snowberry
Any amin'ny arabe, ao amin'ny valan-javaboahary na eo an-tokontany dia indraindray dia mahita kirihitra ambany amin'ny fotsy fotsy amin'ny endrika baolina. Ity zavamaniry tsy mahazatra ity dia antsoina hoe snowberry (Symphoricarpus, Snowfield). Mety ho singa tena mahafinaritra ao amin'ny tontolo iainana izany, ary tsy mitaky fahasahiranana be ny fikarakarana azy. Fifantenana tranokala iray mba hambolena rakotra alaola Tsy misy fepetra manokana ny fepetra sy ny toeran'ny landihazo snowberry.
Ahoana ny fikarakarana fuchsia ny efitra
Fuchsia dia zavamaniry isan-taona mitombo amin'ny natiora any Amerika Afovoany sy Atsimo ary Nouvelle Zélande. Fuchsia indoor dia zavamaniry mitovitovy, manana karazana sy endrika maro. Nambolena tao amin'ny kolontsaina nandritra ny 200 taona mahery izy io, ary ny mpamboly voninkazo dia miantso azy hoe "jiro jiro" na "balerina". Eo ambany fitondran-tena voajanahary, ny fuchsia dia maneho ny bozaka misy sampana matevina.
Ahoana no hiatrehana ireo bibikely orkide
Maro amin'ireo zavamaniry hafakely no malaza amin'ny mpamboly voninkazo. Orkide dia tsy misy ankoatra. Rehefa mifidy ny zavamaniry tianao ianao, aloha izy ireo dia mandinika ny ravina, ny sampana ary ny tongolobe, ka manadino ny mijery ny tany. Ny famoahana ny vilany miaraka amin'ny voninkazo, matetika ny mpividy dia mitondra bibikely orkide izay efa misy ao amin'ny tany.
Ny toro-hevitra tsara indrindra ho an'ny fambolena
Oxalis na oxalis (avy amin'ny teny latinina Oxalis - "sour") dia an'ny karazana zavamaniry isan-taona sy maharitra isan-karazany ao amin'ny fianakaviana Sour. Mihalehibe izy io, fa ny oksizenina no tena liana amin'ny trano. Mipoitra toy ny orinasa izy io, misaotra noho ny voninkazo tsara tarehy, fa ny ravina tsy dia mahazatra.
Afobe ao an-trano: angano na zava-misy?
Ny pineapple dia zavamaniry mahavariana avy any tropiko any Amerika Atsimo. Tany Eoropa, dia nanomboka nitombo tao amina trano fisotroan-toaka izy, ka namorona ny fepetra ara-pirazanana ilaina. Saingy amin'ny ezaka kely, ny ahitra mitombo dia azo atao na dia ao an-trano ihany aza. Ary aorian'ny fotoana dia ity zavamaniry mahaliana ity dia hahagaga antsika amin'ny endriny sy ny voankazo.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Pest control